Ra’iisul Wasaare ABIY AXMED maxuu Soomaalida u arki la’yahay?!!!! – AwKutub News
Ra’iisul Wasaare ABIY AXMED maxuu Soomaalida u arki la’yahay?!!!!
By awkutubnews November 3, 2018
Leave a Comment on Ra’iisul Wasaare ABIY AXMED maxuu Soomaalida u arki la’yahay?!!!!
Intuu RW Abiy talada la wareegay waxyaabo aad loogu qushuuco ayuu ina tusay: awooddii TPLF oo la dhimay, maxaabis la siidaayey, kooxihii hubaysnaa (OLF, GINBOT 7, TPDM, ONLF) oo soo galay waddanka, collaadii Eriteriya oo la soo afjaray, tirada wasiirrada dawladda dhexe oo la dhimay (28 laga dhigay 20), iyo Cabdi M. Cumar dawladdiisii oo noqotay ta kaliya ee Abiy afgambiyey.
Cabdi Muxumed Cumar dhib xad-dhaaf ah ayuu dadkiisa ku hayay, waxuuna noqday “Loma ooyaan” dambiyo uu geystay iyo kuwo aanu geysan intaba lagu soo oogay. Dhibta uu Soomaali u geystay ayaan marnaba la hilmaami karin. Waxaan ka daalacan kartaan caddaynta ay diyaarisay Hay’adda Human Right Watch.
Tags: Abiy Axmed DDS Itoobiya qormo Soomaalida
Previous Entry Meydkii Khashogji xaguu ku dambeeyay ?!!!
Next Entry Puntland Oo U Digtay Musharixiinta Madaxtinimada Maamulkaas